संबिधान सभाको निर्वाचन- निर्वाचन क्षेत्र २४०, तराई र पहाडमा क्षेत्र थप , हिमालमा यथावत – नेपाल डायरी डट कम
अप्रील 12, 2007 अप्रील 12, 2007 by nepaldiary
संबिधान सभाको निर्वाचन- निर्वाचन क्षेत्र २४०, तराई र पहाडमा क्षेत्र थप , हिमालमा यथावत
नेपाल डायरी डट कम @ १०:३०
निर्बाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले २४० (९६ हजार जनसंख्या बराबर १ निर्वाचन क्षेत्र) निर्बाचन क्षेत्र सिफारीस गरेको छ ।
संविधानसभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सरकारले गत चैत ६ गते अर्जुनप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा प्रा.डा. सुर्यलाल अमात्य, प्रा.सुनिति श्रेष्ठ, डम्बर चेम्जोङ सदस्य र डा. स्वयम्भूमान अमात्य सदस्य-सचिव रहेको गठन गरेको आयोग ले आज आफ्नो प्रतिबेदन सरकार लाइ बुझाएको छ । आयोगले आज बिहान १० बजे बुझाएको आफ्नो प्रतिवेदन अनुसार आयोगले संविधानसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि ७५ जिल्लालाई २४०(तराइमा २८ र पहाडमा ७ निर्बाचर क्षेत्र थप गरी) निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गर्ने सिफारिस गरेको छ । जस अनुसार तराइमा ११६ र पहाड र हिमालमा १२४ निर्वाचन क्षेत्र हुने छन् ।
अगिल्लो संसदीय निर्वाचनभन्दा यो संविधानसभाको निर्वाचनमा तराइमा २८ वटा र पहाडमा ७ वटा निर्वाचन क्षेत्र थप हुने भएको छ । हिमाली जिल्लामा भने कुनै निर्वाचन क्षेत्र थप हुने छैन । यसअघिको निर्वाचनमा पहाडमा ९५, हिमाली जिल्लामा २२ र तराइका जिल्लामा ८८ निर्वाचन क्षेत्र गरी कुल २०५ निर्वाचन क्षेत्र रहेका थिए । २०५८ को जनगणना अनुसार हिमाल र पहाडको कुल जनसङ्ख्या ५१.५७ प्रतिशत रहेको छ भने तराइको कुल जनसङ्ख्या ४८.४३ प्रतिशत रहेको छ । जनसङ्ख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने कुरालाई बढी प्राथमिकता दिएका कारण तराइमा निर्वाचन क्षेत्र बढी थप भएको हो । अब तराइमा २८ वटा निर्वाचन क्षेत्र थप हुने भएपछि तराइका सबै जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र थप हुने निश्चित भएको छ भने कुनै कुनै जिल्लामा २ वटासम्म निर्वाचन क्षेत्र थप हुने भएको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, र्सलाही, रौतहट, बारा, पर्सा चितवन, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर गरी २० जिल्लामा कम्तीमा पनि एक निर्वाचन क्षेत्र थप हुने छ भने मोरङ, सुनसरी, कैलाली, र रूपन्देहीलगायतका जिल्लामा भने २ वटासम्म निर्वाचन क्षेत्र थप हुनसक्ने छ । यता बढि जनङ्सख्या भएका काठमाडौँ, काभ्रेपलाञ्चोक, सुर्खेत , कास्की, मकवानपुरलगायतका पहाडी जिल्लामा पनि निर्वाचन क्षेत्र थप हुने भएको छ । तर हिमाले जिल्ला हरुमा मा भने निर्बाचन क्षेत्र थप नहुने भएको छ ।
आयोगले संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि २४० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएमा संविधानसभा कुल सदस्य सङ्ख्या ४९७ हुने भएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट २४० जना, समानुपातिक निर्वाचनका आधारमा २४० जना र मनोनीत १७ जना गरी संविधानसभा सदस्यको सङ्ख्या ४९७ हुने भएको हो । निर्वाचन क्षेत्र जतिसुकै निर्धारण भए पनि संविधानसभा सदस्यका लागि १७ जना मनोनीत गर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।
अघिल्लो तेन्दुलकर बिबादमा
अर्को बैंक ठग Blacklisted Businessmen को पासपोर्ट जफत